Maamulka Qardho oo Beeniyay War dhawaan kasoo baxay Hay’ada Nabad Sugida Qaranka (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Kulan maalintii shalay Magaalada Qardho ee Maamulka Puntiland ku yeesheen Masuuliyiinta Magaaladaasi, ayaa lagu beeniyay hadal dhawaan kasoo baxay Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya. Gudoomiyaha Magaalada Qardho oo kulanka ka hadlay ayaa beeniyay War kasoo baxay Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya oo sheegayay in Magaalada Qardho ay joogaan dad halkaasi ku faafinaya Mad-habta Shiicada. Waxa uu sheegay Gudoomiyaha Magaalada Qardho in aysan ka jirin wax shiiceyn ah, waxa uuna tilmaamay in Magaaladaasi aysan joogin dad u dhashay Dalka Iiraan sidoo kale aysan ka howlgalin NGO-yo ka shaqeeya Faafinta shiiceynta.
Gudoomiyaha ayaa xusay in Magaalada Qardho dadka Yaminiyiinta ah ee ku sugan xaaladooda ay la socdaan , waxa uuna wax lala yaabo ku tilmaamay warka kasoo baxay Sirdoonka Soomaaliya ee lagu sheegay in Magaalada Qardho dadka lagu shiiceeyo. War qoraal ah oo kasoo baxay dhawaan Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Magaalooyinka Muqdisho iyo Qardho ay ka socdaan falal dadka lagu shiiceenayo, waxaana barnaamijkaasi wada Hay’ad laga leeyahay Dalka Iiraan .
Dowlada Iiraan oo ka hadashay Wararka sheegaya in Soomaaliya ka wadaan Faafinta Mad-habta Shiicada